Real Madrid Oo Go’aamisay Qiimaha Ay Ku Iibineyso Karim Benzema – Gool FM
(Real Madrid) 28 Abriil 2018 Wargeyska “Don Balón” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez uu go’aamiyay qiimaha ay ku fasixi karaan weeraryahanka reer france ee Karim Benzema suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
29 jirkaan reer France Karim Benzema ayaa la dhibtoonaya hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkiisa kooxda Real Madrid gaar ahaan sanooyinkii lasoo dhaafay.
Wararka xanta ah ayaa waxay dhawaan sheegayeen in Benzema kooxda kaliya ee xiiseeneyso adiigiisa ay tahay Arsenal, inkastoo ay dhawaan lsoo saxiixdeen xidigaha Pierre-Emerick Aubameyang iyo Alexandre Lacazette.
Florentino Perez ayaa go’aansaday inuu ku qiimeeyo weeraryahanka reer Faransa Karim Benzema aduun dhan $ 70 million si uu kaga diro garoonka Santiago Bernabéu, xagaaga soo aadan.
Laakiin wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Arsenal aysan kali ku ahayn raacdada loogu jiro saxiixa Benzema, waxaana lasoo sheegayaa in sidoo kale loolanka ay qeyb ka tahay Chelsea iyo sidoo kale kooxaha ka dhisan dalka Shiinaha.